काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी
काठमाडौँ । यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउँदा राजधानीमा कोभिड–१९ को संक्रमण भयावह हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनले संक्रमण विस्तारमा मलजल गर्ने र स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने उनीहरूले बताएका छन् । केही सातायता काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ थपिँदै छ । शुक्रबारसमेत उपत्यकामा ४२ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले राजधानीमा सार्वजनिक सवारीसाधन खुलेपछि संक्रमण विस्तार बढी हुने बताए । ‘काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट बन्नतर्फ उन्मुख रहेका बेला सरकारले केही नियम बनाएर सार्वजनिक सवारीसाधन खोल्ने निर्णय गरेको छ जुन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले गलत छ, यसले कोरोना संक्रमण विस्फोट हुन्छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म जतिसुकै गाइडलाइन, नियम बनाए पनि कसैले पालना गरेको देखिएन ।’
वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. भूपेन्द्र बस्नेतले सम्भावित संक्रमणको विस्तार रोक्न राजधानीकेन्द्रित रणनीतिसमेत आवश्यक रहेको बताए । ‘जनघनत्वको दृष्टिले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण विस्तारको जोखिममा उपत्यका छ । यहाँ कोरोनाका केस दिनहुँ बढिरहेकाले नयाँ खालको लकडाउन साउन महिनाभरि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन अनुमति दिनु अत्यन्त घातक हुन्छ, राजधानीमा संक्रमण समुदायमा गयो भने त्यो अत्यन्त ठूलो विपद् हुनेछ ।’
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माले सार्वजनिक सवारीसाधन सुरक्षा उपाय अपनाएर खोल्नुपर्ने र यसको कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने बताइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले समेत कोरोना संक्रमण हावाबाट फैलिन सक्ने संकेत गरिसकेकाले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनले जोखिम बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलेपछि जतिसुकै प्रयास गरे पनि कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
“बिहे भएको ३ बर्ष भयो शारीरिक सम्पर्क भाको छैन अब के गर्नेहोला”?